Hery Rajaonarimampianina : « Hapetraka ny Polisy Repoblikanina miaro ny vahoaka » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Hapetraka ny Polisy Repoblikanina miaro ny vahoaka »
Hery Rajaonarimampianina : « Hapetraka ny Polisy Repoblikanina miaro ny vahoaka »
13/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra ny heviny mahakasika ilay fametrahana ny fanavaozana ny Drafi-pirenena momba Fandriam-pahalemana, na ny RSS ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, omaly, teny amin’ny ivon-toeram-pivoriana Iraisam-pirenena eny Ivato (CCI).
Araka izany, nanambara ny tenany fa hapetraka ny Polisy Repoblikanina mampiseho ny fahefam-panjakana, ary miaro ny vahoaka. Mba ahazoana mametraka izany anefa, nilaza ny Filoham-pirenena fa mila ampy ny isan’izy ireo. “Tsy hitovy amin’ny any amin’ny tany mandroso kosa anefa aloha fa fara-faharatsiny fa hampitomboina ny isan’izy ireo. Efa natao izany, ary mbola atao sy hamafisina sy hotohizana hatramin’izao eo anivon’ny polisim-pirenena, ny zandarimariam-pirenena ary ny tafika”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Notsindriany kosa fa hiezaka hatrany ny Fitondram-panjakana amin’ny fampitaovana azy ireo araka izay azo atao satria ny tranga misy amin’izao fotoana izao, raha ny nambarany hatrany, dia ireo dahalo indray no manam-pitaovana noho ny miaramila sy ny zandary. “Anisan’ny fotodrafitrasa tsy maintsy hotanterahina izany, ary hohamafisina hatrany”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Raha ny mahakasika ny vola hoenti-manatanteraka izany indray, nanambara ny Filoham-pirenena fa misy ny vola avy amin’ny Fitondram-panjakana, ary tafiditra indrindra amin’ny tetibolam-panjakana izany. Saingy, nilaza izy fa, zava-dehibe ny fanatevenana izany. “Manao famatsiana eo amin’ny sehatry ny fandriam-pahalemana ny Fitondram-panjakana. Izany hoe, mila mividy fitaovana, manangana fotodrafitrasa, sns, mba hametrahana ny fandriam-pahalemana tena izy eto amin’ny firenena”, hoy izy.
Voalaza hatrany fa anisan’ny sakana ho amin’ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana ka izay indrindra no hametrahana ny Drafi-pirenena momba ny Fandriam-pahalemana (RSS), izay hiarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka, toa ny Firenena Mikambana, ny Vondrona Afrikanina, ny Vondrona Eoropeanina, ny OIF ary ny SADC. Marihina mantsy fa misy vola mitentina 11 tapitrisa Dolara avy amin’ny mpiara-miombon’antoka mantsy hametrahana io Drafi-pirenena momba ny Fandriam-pahalemana io.
Notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny fisian’ny “Dahalo ambony latabatra” izay tena mambotry ny firenena. Ilaina, hoy izy, ny fanondroana sy fahasahiana manonona ny fisian’ireo “Dahalo ambony latabatra” ary anjaran’ny rehetra izany. Tafiditra amin’izany ny Fiarahamonim-pirenena, izay mitaiza sy manentana, sns. Mba ahafahana miady amin’izany, hoy ny Filohan’ny Repoblika, ny fananana Fitsarana mafy, tsy mitanila ary tena manao ny asany araka ny tokony ho izy.
Drafi-pirenena momba ny Fandriampahalemana
Notanterahina omaly, teny amin’ny Ivotoeram-pivoriana Iraisam-pirenena Ivato (CCI) ny lanonana fampahafantarana ny fametrahana ny Drafi-pirenena momba ny fanavaozana ny sehatry ny Fandriampahalemana (RSS) eto Madagasikara. Drafitra iarahana amin’ny Vondrona Iraisam-pirenena. Nandritra izany koa no nanoloran’ny governemanta, tamin’ny alalan’ny praiminisitra Mahafaly Olivier, ny boky mirakitra io Drafitra RSS io ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Marihina fa misy andry na “Piliers” miisa valo ity Drafitry ny RSS ity ka tazana amin’izany ny Fitsarana, ny tafika, ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena, ny fitantanana anatiny, ny sehatra tsy miankina, parlemanta…
Raha ny mikasika ny RSS indray, ny volana febroary 2015 no niforonany ary nankatoavin’ny Fanjakana ny 27 janoary 2016. Izany hoe, roa taona no namolavolan’ireo mpikatroka ity Drafi-pirenena momba ny Fandriampahalemana ity, izay napetraka hatramin’ny 2021 ireo teboka stratejika.
Tsy kely làlana ireo mpandraharaha mpanao hosoka. Sarona teny amin’ny toeram-ponenana iray teny Ivandry ny 7 marsa lasa teo ny lafarinina efa simba, 26 taonina, nefa mbola nokasaina amidy sy aparitaka tany amin’ireo mpanao mofo. ...Tohiny